Fandaharam-potoana: fampidirana SaaS fanendrena | Martech Zone
Alarobia, Novambra 30, 2011 Alakamisy, Desambra 1, 2011 Douglas Karr
Raha mbola tsy naheno ianao Schedulicity, ianao no .. na hampiasa azy io tsy ho ela! Mpampiasa hatramin'ny 15,000 sahady, ny fandaharam-potoana dia manome orinasa hametraka fanendrena hampiditra mora foana amin'ny Internet, facebook ary ny finday tena fandaharam-potoana amin'ny asan'izy ireo. Tena mora ny rafitra… $ 19 isam-bolana ho an'ny mpampiasa tokana na $ 34 isam-bolana ho an'ny mpampiasa maro. Ny orinasa dia natomboka herintaona sy sasany lasa izay ary manana lafin-javatra matanjaka sy feno mifantoka amin'ny orinasa kely sy salantsalany.
Ny fandaharam-potoana dia fanamafisana toerana fanendrena ho an'ireo orinasa amin'ny vodilanitra maherin'ny 45, ho an'ny zava-drehetra manomboka amin'ny alika an-tongotra, hatrany amin'ny fantsom-boaloboka, amin'ireo teknisiana fantsika sy salon-bolo. Ny lazan'ny serivisy dia miteny ho azy, miaraka amin'ny 60% ny mpanjifa vaovao misoratra anarana amin'ny alàlan'ny referrals ary mpanjifa vaovao 500 mahery no nampiana isan-kerinandro. Ny serivisy dia manana tahan'ny fihazonana 99% mahavariana!
Ireo singa manan-danja dia ahitana:
Fanendrena an-tserasera famandrihana.
Avelao ny mpankafy hamandrika fotoana mivantana avy aminao Facebook pejy.
A complete interface tsara finday mamela ny mpanjifanao hamandrika fotoana amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
Kilasy, atrikasa na hetsiky ny vondrona tohanana, ahafahanao mitantana sy mameno ny kilasinao.
Manome sehatra ifandraisana amin'ireo mpanjifanao manokana sy fampiroboroboana miaraka maodely maodely miloko maodely 75 mahery. Tafiditra ao anatin'izany ny fahaizana manampy hafatra amin'ny upsell amin'ny fampahatsiahivana amin'ny fotoana voatondro!
Ny fandaharam-potoana serivisy ho an'ny mpanjifa, fampianarana ary fitaovana manampy miaraka amin'ny vondron'olona mpampiasa afaka mizara torohevitra mahomby.
Ny fandaharam-potoana dia tsy mitaky rindrambaiko napetraka ao amin'ny tranokalan'ny mpanjifa, mari-pamantarana script roa fotsiny izay mitondra ny interface… mba hahafahan'izy ireo miditra ao amin'ny tranonkalanao ankehitriny ao anatin'ny minitra vitsy. Ary koa, manana izy ireo Facebook fampidirana mba hahafahan'ny mpanaraka anao manindry ny fandaharam-potoananao ary manao fotoana fohy mivantana avy amin'ny Facebook:
Ny fandaharam-potoana dia tsy sehatra fandaharam-potoana fotsiny, fa tena manampy anao hitandrina ny fotoana voatondro ho toy ny lisitra. Omena ny orinasa ny fitaovam-barotra hanampiana azy ireo hameno ny fandaharam-potoanany, amin'ny alàlan'ny fampisehoana tolotra mipoitra:
Ny fampiroboroboana ny varotra dia tafiditra ao anatin'ny vahaolana ihany koa.
Ohatra tsara amin'ny fampanantenan'i Rindrambaiko ho vahaolana. Amin'ny fanomezana endri-javatra matanjaka ho an'ny besinimaro, ny schedulicity dia afaka manome vokatra matanjaka sy mora ho an'ny tompona orinasa. Ny fandaharam-potoana koa dia manomboka programa fandefasana mpanjifa vaovao. Misoratra anarana amin'ny kaonty fitsarana maimaim-poana ao amin'ny Schedulicity.
Tags: fanendrenafangatahana fanendrenafandaharam-potoana amin'ny Internetfandaharam-potoana amin'ny Internetfandaharam-potoana
Maninona ianao no tokony handefa karatra amin'ity fialantsasatra ity